कोरोनाको चपेटामा परेकाे अमेरिकाका लागि अर्को दुःखद खबर, अब के गर्लान ट्रम्प ? — Sanchar Kendra
कोरोनाको चपेटामा परेकाे अमेरिकाका लागि अर्को दुःखद खबर, अब के गर्लान ट्रम्प ?
काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना महामारीसंग जुधिरहेको अमेरिकाका लागि अर्को दुःखद खबर आएको छ । अमेरिकाकी कच्चा तेलको मूल्य इतिहासमा पहिलोपटक ऋणात्मक भएको छ । सोमबार इतिहासमा पहिलोपटक अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य शून्यभन्दा तल झरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सोमबार अमेरिकी कच्चा तेलको मुल्य घटेर माइनस ३७–६३ डलर प्रतिब्यालेर पुगेको छ ।
अमेरिकी तेलको मूल्य पहिलो पटक घटेको छ । यसको अर्थ तेल उत्पादकहरूले मे महिनामा आफ्नो भण्डारण क्षमता सकिने डरले उक्त पदार्थ लिन क्रेतालाई भुक्तानी दिइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमै लकडाउनका कारण सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएसँगै तेलको माग निकै कम भएको छ ।
फलस्वरूप तेल कम्पनीहरूले बढी भएको तेल भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्कर भाडामा लिन थालेका छन् र यसले अमेरिकी तेलको मूल्यमा ऋणात्मक प्रभाव पारेको छ । अमेरिकी तेलको मानक वेस्ट टेक्सस इन्टर्मीडिएट (डब्ल्यूटीआई) को प्रतिब्यारल मूल्य ३७–६३ अमेरिकी डलरमा झरेको छ ।
सोमवार तेलको मूल्यमा गिरावट देखिनुमा विश्व तेल बजारको प्राविधिक पक्षको पनि भूमिका छ । तेलको कारोबार भविष्यको मूल्यका आधारमा गरिन्छ । मे महिनाका सम्झौताको म्याद मङ्गलवार सकिँदैछ र व्यापारीहरू तेलको थप वितरण लिएर भण्डारण खर्च गर्नबाट जोगिनका लागि आफूसँग रहेको तेल बेच्न चाहन्थे ।
जुन महिनामा पनि वेस्ट टेक्सस इन्टर्मीडिएट (डब्ल्यूटीआई) को मूल्य कम नै थियो । तर त्यति बेला पनि प्रतिब्यारल मूल्य २० अमेरिकी डलर थियो । यसैबीच जुन महिनाको सम्झौताका आधारमा कारोबार भइरहेको ब्रेन्ट क्रूड भनिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तेलको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । ८.९ प्रतिशतले तल झर्दै उक्त तेलको मूल्य प्रतिब्यारल २६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
लकडाउन जारी रहे अमेरिकामा तेलको जुन महिनाको मूल्यमा पनि गिरावट आउन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् । तेल उद्योग घटिरहेको माग र उत्पादकहरूबीच उत्पादन घटाउने विषयमा भइरहेको खिचातानीका बीच सङ्घर्ष गरिरहेको छ । केही हप्ताअघि तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन ओपेक र उक्त सङ्गठनका सहयोगीहरूबीच विश्वव्यापी रूपमा तेल उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले कटौती गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौता तेल उत्पादनमा सहमति जनाइएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कटौती थियो ।
यस्तै अमेरिकाका एकजना वरिष्ठ विज्ञले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर झनै खतरनाक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रीभेन्सन सीडिसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले आगामी जाडो महिनामा साधारण फ्लु को यामसँगसँगै कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिए ।
अमेरिकाका कैयन् राज्यहरूले अर्थतन्त्र पुन: खुला गर्ने तयारी गरिरहँदा उनले दोस्रो लहरको सङ्क्रमण साधारण फ्लु फैलने मौसममा हुनसक्ने भएकाले त्यसले दोहोरो चाप पार्न सक्ने बताएकोको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
स्वासप्रस्वाससम्बन्धी दुई थरी प्रकोप एकसाथ आइपरेमा त्यसले अमेरिकी स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा अकल्पनीय भार पर्ने उनले बताए । उनले आउने महिनाहरूमा त्यस्तो अवस्थासँग जुझ्ने गरि तयारी थालिनुपर्ने र सामाजिक दूरी कायर राखिराख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकामा ८ लाख १९ हजार भन्दा धेरै मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने ४५ हजार ३ सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोनाका कारण विश्वभर २५ लाख ८० हजार भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै १ लाख ७९ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।